Dhaabbilee gurguddoo gabaa addunyaa toohachuu turan - NuuralHudaa
Dhaabbilee gurguddoo gabaa addunyaa toohachuu turan
Last updated Feb 2, 2022 5
Addunyaan tun addunyaa dalagaati. Kan jabaatee hojjate bu’aa bahii jireenyaa haala salpaan moohachuu dandaya. Inni dalagaa jibbee usee taa’u ammoo, kasaaraa guddoo mudachuu mala. haalli addunyaa tanaa wal xaxaadha. Yeroo garii inni jabaatee hojjatu kasaaraa guddaa keessa seenee, kuun ammoo waanuma xiqqoo hojjatee abbaa milkii taha. Barruu tana keessattii dhaabbilee gurguddoo gabaa addunyaa toohachuu turan, kan yeroo ammaa kasaaran isinii dhiheeysina.
Kaampaaniin kodak kaampaanii fotooti. Waggoota muraasa dura osoo kaameraan dijitaalli hin oomishamin, ummanni addunyaa hundi kaameraa analog fayyadamaa ture. Kaameraan yeroo sanii akka kaameraa hammayyaa memory card hin qabu. Footoon fiilmii irratti kaafama. Eega fiilmiirratti kaafamee booda mana dukkanaawaa keessatti keemikaala adda addaa keessa cuuphamee foototti jijjiirrama. Yeroo sanitti kaampaaniin kodak hangafaafi adda dureedha. Kaampaaniiwwan xixiqqoon dalagaa kanatti bobbahan jiraatanis, hanga kaampaanii kodak kan milkaawe hin jiru. Yeroo sanitti kampaaniin kodak kaameraa osoo hin taane, fiilmii kaameraa oomishuudhaan beekama. Bara 1977 akka lakkofsa miilaadiyaatti kaampaanichi kaameraa dijitaala yeroo jalqabaatiif oomishe. Yeroo san kaampaanin Kodak teknoolojii haaraya oomishuu qofarratti xiyyeeffate. Garuu teknoolojiin inni oomishe kun kasaaraa guddaaf isa saaxile. Eega kaameraa dijitaala oomishee booda, dhaabbileen birootis teknoolojii kana hammayyeessanii oomishutti seenan. Canon, Nikon, Pentax fi dhaabbileen biroo oomisha kaameraa dijitaalaa oowwisanii itti fufan. Eega kaameraan dijitaalli oomishamee booda gabaan kaameraa fiilmii ni badde. Namni kaameraa fiilmii bituu dhiisee gama dijitaalaa deebi’e. Madda galii dhaabbata Kodak kan tahe fiilmiin kaameraa faaydaa dhabe. Haala Kanaan dhaabbanni Kodak kasaaraa guddaa keessa seene. Dhaabbanni kodak bara 1996tti, dhaabbilee gurguddoo addunyaa madda galii ol aanaa qaban keessaa sadarkaa 5ffaa irra ture. Amma garuu qabeenya san hunda kasaaree, printara xixiqqoo waraqaa print ittin godhaniifi, manzaraa yookaan eyeglass oomishuu eegalee jira.
Excite dhaabbata intarneetaati. Bara 1999 dura dhaabbanni excite Yahootti aanee sadarkaa 2ffaa irratti argama ture. Yeroo sanitti Yahoon search engine (internet waa namaa barbaadu) keessaa 1ffaadha. Yahootti aanee excite sadarkaa 2ffaa irra ture. Achi booda dhaabbatichi tajaajila isaa doolaara $750,000n kaampaanii Googletti gurgure. Dhaabbanni google daataawwan Excite hunda gama maqaa ofii jijjiiree bifa haarayaan hojii eegale. Waggoota muraasa booda maqaan Excite jedhamu dhabama tahee, google addunyaa guutuu toohate. Yeroo ammaa search engine addunyaa tanarra jiran keessaa kan akka google beekamu hin jiru. Google sadarkaa 1ffaa irratti argama.
Waggoota muraasa dura guutuu addunyaatti VHS tajaajila guddaa kennaa ture. Rakkoon guddaan yeroo sanitti ture ammoo qaalawiinsa gatii kaaseeta VHS ti. Fiilmiin Kaaseeta VHS irratti waraabbame habbaan tokko doolara ameerikaa $97 ykn birrii 5,000 olitti gurgurama. Filima hunda mallaqa dila Kanaan bitanii daawwachuun waan dandayamuu miti. Sababaa kanaaf Namni fiilmii laaluu fedhu hundi, kuusaa Blockbuster jedhamu kana dhaqee filima barbaadu kireeffatee laala. Yeroo muraasa booda intarneetni guutuu addunyaa wal gahee namni hundi mana isaatti intarneeta galfachuu eegale. Itti aansuun dhaabbileen Netflix fi Hulu jedhaman fiilmiiwwan adda addaa intarneeta irratti kireessuu jalqaban. Namni filima laaluu fedhu, Netflix irratti miseensa tahee baatii baatiin mallaqa muraasa qofa kafala. Achi booda remote isaatiin jijjiiraa filima fedhe daawwata. Akka odeeffannoowwan tokko tokko mul’isanitti Hogganaan dhaabbata Netflix, dhaabbata Blockbuster waliin hojjachuuf gaafatee ture. Garuu hoggantonni Blockbuster hogganaa Netflix kan isaan wajjiin hojjachuuf kabajaan dhaqee gaafate kana itti koflanii gaggeeysan. Waggoota muraasa booda gabaaan addunyaa jijjiramte. Netflix dhaabbata fiilmii intarneetarratti kireessu keessaa adda duree tahee, Blockbuster ammoo kasaaree idaa baankii jalatti hafe. Yeroo ammaa dhaabbanni blockbuster jedhamu guutumatti dhabama tahee jira.
Akkuma hedduun keenya beeynu Nokian dhaabbata telefoona oomishuun beekamuudha. Waggotuma muraasa dura telefoonni Nokia telefoona Jabaa fi jaalatamaadha. Yeroo sanitti telefoonni Nokiyatti qixxaatu hin jiru. Bara 2007 akka lakkofsa miilaadiyaatti eega iPhone Jalqabaa oomishamee magaalaaf dhihaatee booda, Nokian kasaaraa guddaa keessa seenuu jalqabe. Yeroo sanitti dhaabbanni google dhaabbata Nokia waliin hojjachuuf gaafatee ture. Dhaabbanni google softweera telefoonaa kan Android jedhamuun beekamu hojjata. Nokian ammoo software dhuunfaa isaa kan Symbian jedhamu qaba. Nokian software Symbian jedhamu kana guddisee galii guddaa irraa argachuu waan barbaaduuf, afeerraa kaampaanii google irraa isaaf dhihaate kana didee hojii isaa itti fufe. Dubbiin tun garuu miseensota Nokia jiddutti mormii jabduu kaaste. Gurmuun tokko softweeruma Symbian jedhamu kana fooyyessinee hojjanna jedha. Gareen biroo ammoo Software Symbian jedhamu kana ofirraa dhiisnee software biroo kan MeeGo jedhamu oomishna jedha. Osoma hojjattoonni Nokia dhimma kanarratti wal falaman, yeroo muraasa booda dhaabbileen biroo google wajji walii galanii telefoona Android oomishuu eegalan. Ummanni dur Nokia fayyadamaa ture hundi gama android deebi’uu eegale. Achi booda bara 2013tti Nokian dhaabbata Microsoft wajji walii galee telefoona Windows oomishuu eegale. Kun ammoo daran kasaaraa guddaaf isa saaxile. Yeroo ammaa garuu Nokian google wajji walii galuudhaan telefoona Android oomishuu eegalee jira.
og barruuTana Quba Qabduu?
May 22, 2022 sa;aa 2:11 pm Update tahe